उपसभापति रामचन्द्र पैडोल, केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरुमाथि आक्रमण
कात्र्तिक १४, २०७०
मंसीर ४ गते सम्पन्न हुन गईरहेको संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा नेपाली कांग्रेका नेता तथा उम्मेदवारहरुमाथि नेकपा एकीकृत माओवादी र विभिन्न अज्ञात समूहहरुबाट श्रृङ्खलावद्ध आक्रमण जारी छ ।
गए राती नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं तनहुँ क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल वास बसेको बेला तनहुँको रामजाकोटका स्थानीय कार्यकर्ता गोविन्द गिरिको घरमा अज्ञात समूहले पौडेललाई लक्षित गरी करिव १ बजे पेट्रोल बम प्रहार गरेका छन् । आक्रमणबाट पौडेल चढेको वा ५ च ७५५५ नम्वरको गाडीमा क्षति हुनुको साथै गिरीको घरमा समेत सामान्य क्षति पुगेको छ । घटनास्थलमा नपड्किएका चारवटा पेट्रोल बम फेला परेको थियो ।
त्यसैगरी दाङ्ग क्षेत्र नं. २ कि उम्मेदवार सुशीला चौधरीले निर्वाचनका प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्दै आएको गाडीमा पनि आगजानी गरिएको छ । लालमटिया–४ मा स्थानीय कार्यकर्ता युवराज भुसालको घरमा पार्किङ्ग गरी राखेको लु १ अ ४५२३ नम्वरको गाडीमा आगजानी गरिएको हो । अहिलेसम्म यी दुवै घटनाको कुनै समूहले जिम्मा लिएका छैनन् ।
यसैगरी हिजो बुधवार गोरखा क्षेत्र नं. १ बतासेमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बृहत आमसभामा भाग लिनजाने क्रममा प्रचार विभाग प्रमुख एवं केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव चीनकाजी श्रेष्ठ चढेको गाडीमा एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए । माथी डाँडामा बसेर ढुङ्गा लडाउँदै ज्यानै लिने उद्देश्यले गरिएको यस्तो सांघातिक आक्रमण चारपटक भएको थियो । पहिलो पटक गोरखाको लुदि खोला नजिकको जंगलमा, ताक्लुङ्ग गा.वि.सको तिनमाने भञ्याङ्ग नेर पुगिसकेपछि दुई पटक, त्यसपछि घैरुङ्ग गा.वि.समा गरी आक्रमण भएको थियो । दोश्रो पटकको तिनमाने भञ्याङ्गमा भएको आक्रमणमा आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । त्यहाँ प्रहरीले दुई पटक हवाईफायर समेत गरेको थियो । त्यसपछि पनि तेश्रो पटक फेरि आक्रमण गरेपछि एकिकृत माओवादी संग सम्पर्क गर्दा क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार एनेकपा माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराई सम्पर्कमा आउनु भएन । एमाओावदीका अध्यक्षबाट त्यस्तो घटना अव नहुने जानकारी प्राप्त भएपछि पनि थप चौथो पटक आक्रमण भयो । प्रहरीले जिम्मेवारीका साथ आफ्नो कर्तब्य निर्वाह नगरेको भए कांग्रेसका नेताहरुको ज्यानै गुम्न सक्ने भयावह स्थिति थियो । घटनामा पुगेका र सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरुको सुझवुझपूर्ण कार्यशैलीले गर्दा आत्रमणकारीको निशानाबाट नेताहरु जोगिएका हुन् । गृह प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको यस कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।
यो घटनाबाट देश विदेशमा आफूलाई शान्तिपे्रेमी र लोकतान्त्रवादी भनि प्रस्तुत गर्ने एनेकपा माओवादीका डा. बावुराम भट्टराई साँचो अर्थमा अझैपनि हिंसावादी, सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी भएको पुष्टी भएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचन परिचालन समन्वय केन्द्र ।